Factory Factory | Mpanamboatra fitaovana any Sina, mpamatsy
ny Mpisaraka amin'ny ranoka matevina mifangaro mikarakara indrindra ny fako amin'ny atin'ny rano mihoatra ny 90%, izy io dia karazana fitaovana avo lenta izay ampiasaina amin'ny fanivanana ny zezika toy ny kisoa, omby, akoho, ondry ary ny karazana biby fiompy lehibe sy salantsalany. Izy io koa dia azo ampiasaina amin'ny tsy fahampian'ny rano amin'ny habetsaky ny rano, toy ny residu curd curd, ary ny atin'ny rano ao amin'ny fitoeran-divay.
Masinina fanamainana varingarina tokana Rotary dia be mpampiasa amin'ny fanamainana fitaovana amin'ny indostria toy ny simenitra, fitrandrahana, fananganana, simika, sakafo, zezika mitambatra, sns.
Ny milina cooler drum dia tokony hamboarina sy ampiasaina amin'ny tsipika famokarana zezika organika na tsipika famokarana zezika NPK hamita ny fizotry ny famokarana zezika feno. nyMilina Pillets mangatsiaka milina mazàna manaraka ny fizotra fanamainana mba hampihenana ny hamandoana sy hampitomboana ny tanjaka sombiny na dia hampihena ny maripana sombiny aza.
ny Milina fampidinana & famahanana dia ampiasaina ho toy ny hopper ara-nofo mandritra ny fanodinana fitaovana ary mety amin'ny fitaovana fampidinana kamiao forklift. Ny famoahana fanamiana sy mitohy dia tsy vitan'ny fitsitsiana ny vidin'ny asa ihany, fa ny fanatsarana ny fahombiazan'ny asa koa.
ny Multiple Hoppers Single Weigh Static Organic & Compound Fertilizer Batching Machine dia mety indrindra amin'ny fampifangaroana, famonoana ary famahanana karazana fitaovana 3-8. Ny rafitra dia fehezin'ny ambaratonga solosaina ho azy. Ny valizy pneumatika dia ampiasaina hifehezana ny famatsian-materialy ao amin'ny fitoeram-pako lehibe. Ny fitaovana dia afangaro ao anaty fitoeram-pangaro fampifangaroana ary alefa ho azy avy amin'ny conveyor fehikibo.
ny Separator fisarahana ranoka matevina dia be mpampiasa amin'ny famoahana rano avy amin'ny fako, toy ny zezika biby, reside sakafo, maloto, ranon-javatra residu biogas sns. akoho, omby, soavaly ary karazana fiompiana mahery vaika ho an'ny tain-biby, distillers, dregs, dregs starch, dregs saosy, famonoana zavamaniry sy fifantohana avo lenta amin'ny fisarahan'ny rano maloto.
Ity milina ity dia tsy vitan'ny hoe mamaha ireo olana mandoto ny tontolo iainana ihany fa afaka mamokatra tombony ara-toekarena avo koa.
Masinina poloney boribory biolojika dia ampiasaina amin'ny famolavolana ny zezika biolojika sy zezika biolojika aorian'ny granulate. Izy io dia azo ampifandraisina malalaka amin'ny granulator zezika organika vaovao, granulator press die flat ary granulator die die. Ity milina mpamorona endrika ity dia azo safidiana kapila roa na telo. Aorian'ny famolahana ny granules, ny vokatra vita boribory boribory sy malama dia esorina amin'ny vokatra.
Masinina fonosana avo roa heny Hopper dia ampiharina amin'ny fonosana habetsahana mandeha ho azy amin'ny famokarana zezika. Ny rafitra mandanjalanja tsy miankina miaraka amin'ny fahamendrehana mavesatra sy ny hafainganam-pandeha haingana amin'ny alàlan'ny fampiasana sensor Toledo, ny fizarana fandanjana iray manontolo dia fehezin'ny solosaina.
ny Azo entina Mobile Belt Conveyor maivana sy mora entina, fivezivezena azo ampiharina amin'ny entana betsaka, fonosana fitaterana ary fotoana hafa, mifanaraka amin'ny fotoana maro samihafa, ary fikojakojana mora.